(Daawo) Saraakiisha beesha Ciise Maxamud “Garowe waa magaladeena, waana difaacanaynaa” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Saraakiisha beesha Ciise Maxamud “Garowe waa magaladeena, waana difaacanaynaa”
Iyada oo qalaaalasaha siyaasadeed ee ka dhexeeya Madaxweyne Dani iyo ku xigeenkiisa Axmad Karaash uu cirku isku sii shareerayo ayaa hadana waxaa ka bilaawday Gobolka Nugaal ee Dowlad Goboleedka Puntland is-abaabul ciidan oo ay sameeynayo beesha Ciise Maxamuud oo iyadu deegaan ahaan sheegata in ay leedahay Gobolka Nugaal, gaar ahaan magaalo Madaxda Puntland ee Garowe.
Saraakiisha ciidanka iyo dhalinta ka soo jeeda Garowe ayaa baaq u diray guud ahaan beesha degta Nugaal in ay u diyaar-garoobaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen waxa ay ku sheegeen cadowga ku soo duulay deegaankooda. Beesha Ciise Maxamuud ayaa ah beel leh ciidaan iyo hub aad u farabadan, iyada oo beeshu hada martigalisa dowlada Goboleedka Puntland.
Hadalka ka soo yeeray saraakiisha ayaa ah mid ka digaayo in dad aan u dhalan degaanka ay ciidan keenaan kuna qalqaliyaan amniga dadka degan deegaanka. Dadka reer Garowe ayaan xuquuqdooda marnaba lagu tuman sida ka dhacday Muqadisho oo kale.
Halkaan ka daawo shirkii Jaraa’id oo ay qabteen saraakiisha iyo dhalinyarada reer Garowe.
Previous articleSomali minibus hits roadside bomb, six killed
Next articleSidee ayey awoodda Turkiga u bedeshay dagaalka Libya, una bah-dishay Imaaraadka Russia iyo Masar?